Ndịàmà Jehova nọ́ n’Afrịka
Burundi: Ebe Nolla na-egosi ụmụ nwoke gwara ya gụnye ha icheku ọkụ Ụlọ Nche
MMADỤ OLE BI NA HA 1,082,464,150
NDỊ NKWUSA OLE NỌ NA HA 1,453,694
MMADỤ OLE A MỤỤRỤ BAỊBỤL 3,688,959
Iji Ọkada Ezi Ozi Ọma
Bene Rịpọblik: Onye a bụ Nwanna Désiré. Ọ na-akpọnye akwụkwọ anyị e tinyere na teepụ na ihe nkiri ndị a na-egere egere n’ọkada ya ma jiri ya na-ezi ndị o bu ozi ọma
Ihe ndị mmadụ na-ejikarị eme njem n’ebe ndịda Bene Rịpọblik bụ ọkada. Ihe ha na-akpọ ya bụ zem. E nwere otu nwanna na-asụ ụzọ inyeaka n’ebe ahụ. Aha ya bụ Désiré. O tinyere ihe e ji akpọ egwú na ọkada ya, tinyekwa ígwè okwu abụọ n’akụkụ ebe onye ọ ga-ebu n’ọkada ga-anọ ọdụ. Ihe ọ na-akpọ mgbe niile bụ akwụkwọ anyị na ihe nkiri ndị a na-egere egere. Ọ na-abụ o buru mmadụ, ya akpọnye ya, onye ahụ amalite ige ya. Ihe ahụ ọ kpọnyere na-atọ ọtụtụ ndị o bu ụtọ nke na mgbe ha ruru ebe ha ga-apụ, ya esiere ha ike ịrịtu ma ọ bụkwanụ ha ajụ ịrịtu ruo mgbe ihe ahụ kpọchara. Nwanna Désiré kwuru, sị: “M na-achọ ka ha rịtuo kwụọ m ụgwọ gawa ka m nwee ike iburu onye ọzọ. Ma ama m na ozi ọma ha nụrụ karịrị ego. Ihe a m na-eme emeekwala ka m nyefee ndị mmadụ ọtụtụ akwụkwọ anyị.”
Otú Otu Nwatakịrị Si Gbaa Ezigbo Mbọ
Na Burundi, e nwere otu nwata nwaanyị ya na ndị mụrụ ya bi. Aha ya bụ Nolla. Ọ dị afọ isii. Otu ụbọchị ha na-esi nri n’ekwu, ụmụ nwoke abụọ na-arụ ọrụ n’akụkụ ụlọ ha bịara gwa ya gụnyetụ ha icheku ọkụ ka ha jiri ya tinye ọkụ. Nolla ebidobeghị ịga akwụkwọ. Ọ nọ na-akwanye ọkụ n’ekwu ahụ mgbe ha bịara. Ọ hapụrụ ha ka ha gụrụtụ icheku ọkụ. Obere oge ha pụrụ, Nolla chọpụtara na ha ji icheku ọkụ ahụ mụnye sịga na-aṅụ. Ihe a ọ hụrụ wutere ya nke ukwuu, ya asị ha, “Ọ bụrụ na m ma na unu ga-eji ya mụnye sịga, agaraghị m ekwe ka unu gụrụ ya.” Nolla chetara otu Ụlọ Nche kwuru gbasara ịṅụ sịga ọ hụrụ n’Ụlọ Nzukọ Alaeze. Ụlọ Nche ahụ bụ Ụlọ Nche Jun 1, 2014. E sere sịga n’ihu ya. Nolla gbaara gaa n’Ụlọ Nzukọ Alaeze, weta abụọ, nye ha ya ma gwa ha gụọ ya mgbe ahụ. Mgbe ọzọ ọ hụrụ ha, ọ gwara ha bịa mgbakọ ukwu ha ga-enwe. Ihe a Nolla mere tụrụ ha n’anya, ha abịa mgbakọ ahụ abalị abụọ. Mgbe a gbasara nnọkọ nke ụtụtụ, Nolla hụrụ ha ma gwa ha bịa soro ha rie nri. Ihe ha hụrụ na ihe ha nụrụ ná mgbakọ ahụ masịrị ha, ya emee ka ha na Ndịàmà Jehova malite ịmụ Baịbụl.
Izi Ndị Mkpọrọ Ozi Ọma
Ndị okenye nọ́ na Laịberịa na-aga n’ụlọ mkpọrọ dị iche iche ezi ndị mkpọrọ ozi ọma. Otu onye ọsụ ụzọ pụrụ iche aha ya bụ Yves, nke na-eje ozi na Monrovia kwuru, sị: “N’ọnwa Mach, ndị mkpọrọ atọ ghọrọ ndị nkwusa a na-emebeghị baptizim. Nke a mere ka ndị nkwusa e nwere n’Ụlọ Mkpọrọ Monrovia Sentral ruo mmadụ isii.” Olee otú ndị nkwusa ndị a na-esi aga ozi ọma? Nwanna Yves kwukwara, sị: “Ha na-enwe nzukọ ozi ubi na Wenezdee na Satọdee ọ bụla. E nwechaa nzukọ ahụ, ha ebido ịga n’ọnụ ụlọ mkpọrọ ọ bụla na-ezi ndị mkpọrọ ibe ha ozi ọma.” Ọtụtụ ndị mkpọrọ na-amụ Baịbụl n’onwe ha, na-abịakwa ọmụmụ ihe anyị a na-enwe n’ụlọ mkpọrọ. Otu onye nnọchiteanya alaka ụlọ ọrụ anyị bịara n’ụlọ mkpọrọ a kwuo okwu ihu ọha. Mmadụ iri asaa na itoolu bịara nụrụ okwu ahụ. E nwekwara ụlọ mkpọrọ isii ndị ọzọ ndị mkpọrọ na-ezukọta amụ Baịbụl. Nke a emeela ka ọtụtụ n’ime ha kpawa àgwà ọma.
“Anyị Chọsiri Ike Ka A Bịa Nyere Anyị Aka”
Ụmụnna anyị gbara ezigbo mbọ nyere ndị nwere mmasị nọ n’ime ime obodo aka ịbịa Ncheta Ọnwụ Jizọs. Otu n’ime ndị ha nyeere aka bụ ndị a na-akpọ ndị San ma ọ bụ Ndị Ime Ọhịa. Ọ bụ ha nwe ebe ndịda Afrịka. Ha anaghị ebi otu ebe. Ọrụ ha bụ ịchụ nta na ịtụtụ mkpụrụ osisi na ihe ndị ọzọ ha ga-eri. N’afọ 2015, onye ọsụ ụzọ pụrụ iche nke na-eje ozi n’ebe ugwu Namibia aha ya bụ Glenn haziri ka a nọrọ n’ime ime obodo San cheta ọnwụ Jizọs. Obodo a dị n’ebe ọwụwa anyanwụ Rundu. Isi na Rundu gaa ya dị narị kilomita abụọ na iri asaa. Ihe a bụ nke ugboro abụọ a na-eme Ncheta Ọnwụ Jizọs n’obodo a. Ma na nke mbụ ma na nke abụọ, ndị isi obodo ahụ nyere Ndịàmà Jehova ikike ka ha nọrọ n’ụlọikpe e nwere ebe ahụ cheta ọnwụ Jizọs n’akwụghị ụgwọ. Narị mmadụ abụọ na iri atọ na abụọ bịara ya n’agbanyeghị na ezigbo mmiri zoro tupu amalite ime ya na mgbe a na-eme ya. Ndị obodo a na-asụ asụsụ Khwe. Onye na-ekwu okwu Ncheta Ọnwụ Jizọs kwuo na Bekee, a sụgharịara ha ya na Khwe. Ebe ọ bụ na e nweghị Baịbụl n’asụsụ Khwe, e ji slaịd gosi ha ihe Aịzaya 35:5, 6 kwuru. Nwanna Glenn na-amụrụ ọtụtụ ndị obodo a Baịbụl. O kwuru, sị: “Kemgbe afọ abụọ, m na-abịa ebe a amụrụ ndị mmadụ ihe otu ugboro n’ọnwa. M bịa, m na-anọ abalị ole na ole. Ma, ha anaghị emecha nke ọma. Ihe kpatara ya bụ asụsụ, ọzọ abụrụ na mụ anaghị abịa mgbe niile n’ihi na ụzọ dị anya. Anyị chọsiri ike ka a bịa nyere anyị aka. Mgbe m gakwuuru ndị isi obodo ahụ ka ha nye anyị ebe anyị ga-anọ eme Ncheta Ọnwụ Jizọs, otu n’ime ha gwara m ka anyị rụọ Ụlọ Nzukọ Alaeze n’obodo ha. Ọ sịrị na ha ga-enye anyị ala, jirikwa ego ha rụọrọ anyị ya. Naanị ihe ha chọrọ ka anyị meere ha bụ ka anyị kpọnye ha ‘pastọ’ ma ọ bụ zụpụta otu n’ime ha ka ọ bụrụ pastọ.”
Namibia: Ebe ndị nkwusa abụọ na-ezi nwaanyị Himba ozi ọma